पूर्वएमालेबाट सभासद बनेका गुप्ताले पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेको आरोप, मातृकाको नेतृत्वमा धर्ना - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७७, शनिबार ५ : ३४
वीरगन्ज । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का पर्सा जिल्ला कमिटी सदस्य मुकेश चौरसियाको हत्यामा पूर्व सभासद नै संलग्न रहेको आरोप लागेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रथम संविधानसभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्ब्र ३ बाट निर्वाचित भएका राजकुमार गुप्तामाथि मुकेशको हत्या गरेको आरोप लागेको हो ।
पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका भनिएका गुप्तामाथि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मुकेशको हत्या गरेको आरोप लागेको हो ।
पर्सामा ओलीइतर समूह केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधरले पनि मुकेशको हत्या भएको घटनामा गुप्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको आरोप लगाएको छ ।
नेकपाका नेता गोपाल ठाकुरले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पूर्व सभासद गुप्ताको डिजाइनमा पर्साको विन्दवासिनीमा बिहीबार पार्टी कार्यक्रममा आक्रमण गरिएको र उक्त आक्रमणमा पूर्व माओवादी नेता मुकेश चौरसियाको लाठी प्रहार गरी घाइते बनाइ हत्या गरिएको दाबी गरेका छन् ।
पर्साकी एसपी रानीको निगाह बक्स ! राजकुमारका सात खत माफ !
अस्ति बिहीबारको दिन विन्दवासिनी गाउँपालिकामा नेकपा अध्यक्ष र…
Posted by Gopal Thakur on Friday, October 23, 2020
ठाकुरले पर्सा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गंगा पन्तको नियतमाथि पनि शंका व्यक्त गरेका छन् । पूर्व सभासद गुप्ताको नाम जाहेरीमा भएकाले एसपी पर्सा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको र पीडितलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै पीडा दिइरहेको उनले विश्लेषण गरेका छन् ।
नेकपाको विन्दबासिनी गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष र सचिव पदको शपथग्रहण कार्यक्रम चलिरहँदा आक्रमण भएको थियो । ओली पक्षका भनिएका नेकपा कार्यकर्ताले प्रचण्ड–नेपाल पक्षको भनिएको कार्यक्रममा आक्रमण गरेका थिए ।
आक्रमणमा करिब ८ जना घाइते भएका जनाइएको छ । घाइतेमध्ये पूर्व माओवादी नेता चौरसिया मृत्यु भएको छ ।
आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भनिएको छ । तर, मुख्य योजनाकार भनिएका पूर्वसभासद गुप्ताविरुद्ध भने प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।
घटनामा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडित पक्षले शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको समेत जनाइएको छ ।
पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एवम् नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवको नेतृत्वमा पर्सा प्रहरी अगाडि धर्ना दिइने जनाइएको छ ।